Atrikasa hanatsarana ny fitsirihana ny fampiasana ny volam-panjakana
"Tahirimbolam-panjakana mahitsy, madio sy mangarahara amin'ny fanatanterahana ny asa". Io no isan’ny hafatra lehibe izay nampitain’ny Tale Jeneralin’ ny Tahirimbolam-panjakana, RAJAOFETRA Andry Nirina, ho an’ireo Auditeurs 74 manerana ny Nosy avy ao amin’ny "Direction de la Brigade d’Investigation Financière et de l’Audit" (DBIFA) sy ny “Cellule d’inspection régionale” eny anivon’ny faritra 23 izay manaraka fiofanana manokana, andiany voalohany, any Ampefy nanomboka ny 27 septambra 2021.
Vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny Banky Iraisam-pirenena io atrikasa io amin’ny alalan’ny Projet PAPSP (Programme d’Appui à la Performance du Secteur Public) ary mizara andiany roa. Ny Tale Jeneraly sy ireo mpitsirika manana fahaizana manokana momba ny hosoka avy ao amin’ny DBIFA no mampiofana. Ny Mahakasika ny “déontologie” izay takiana manokana amin’ireo mpitsirikin’ny Tahirimbolam-panjankana no anjara fampiofanana nentin’ny Tale Jeneraly. Ny fiofanana kosa dia miompana amin’ny fitsirihana halatra sy fandikan-dalana amin’ny fitantanana volam-bahoaka ; fanadihadiana heloka amin’ny fanodikodinambolam-panjakana ; famotorana sy fitondrana ady eo anivon’ny fitsarana mahefa ; ary fahaiza-manao amin’ny fandinihana ny antontan-kaontim-panjakana.
Nomena lanjany manokana tokoa ny fitantanana mahitsy sy mangarahara mba hisian’ny tamberin’andraikitra mazava amin’ny fikirakirana ny volam-bahoaka izay vina iraisana eto anivon’ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanambola amin’ny sori-dalana iasan’ny Tahirimbolam-panjakana. Ny Foibem-pitondrana ankapoben'ny Tahirimbolam-panjakana dia manao ho zava-dehibe ny fanatrarana izany tanjona izany ka mandray an-tanana ny fampahafantarana ny mpiara-miasa ny asa irosoana mba hampisy vokany mivaingana amin’izany paikady izany.
Toromarika nomen’ny Tale Jeneraly, RAJAOFETRA Andry Nirina, ho an'ny mpiara-miasa rehetra noho izany ny mba hanao tantsoroka amin’ny ady amin’ny fanodinkodinana volam-panjakana sy ny fandavana izay endrika kolikoly rehetra eo amin’ny andraikitra sahanina. Izany dia mba ho fandavorariana ny vinam-pitantanana madio, indrindra ho an' ny "auditeurs" eto anivon’ny Tahirimbolam-panjakana, izay miasa ao amin’ny DBIFA.
Ireto farany izay manana andraikitra hanao fanamarinana ny fitantanana ny volam-panjakana . Amin’izany asa sahaniny izany dia manao fitsirihana ifotony ny fitantanana izy ireo rehefa misy tsy fahatomombanana tsikaritra amin’ny fandinihana ireo antontan-kaonty voarainy avy amin’ireo mpitankaontim-bolampanjakana isan-tsokajiny manerana an’ny nosy. Ny vokatr’izany fitsirihana izany dia mety ho fanitsiana ny lesoka amin’ny fomba fitantanana na miafara amin’ny fanenjehana ny fandikan-dalana ho an’ireo izay ninia nanodinkodina ny volam-panjakana.
Antenaina noho izany ny hananan’ireo "auditeurs" eto amin’ny Tahirimbolam-panjakana fomba fiasa mitovy tantana mba hampirindra ny paikady atrehina aorian’ny atrikasa. Takiana ihany koa ny fahakingam-pihetsika avy amin’izy ireo manoloana ny fisorohana mialoha ny hosoka sy halatra ary fahasahiana manoloana ny fanenjehana ny fanodikondinana volampanjakana. Izao ezaka fampiakarana ny fahaizamanaon’ny mpiasan’ny Tahirimbolampanjakana izao dia ezaka mitohy ary hotanterahina isan-taona mba hahafahana miroso lalina hatrany amin’ny kalitaon’ny fitantanana ny kaontimbolam-panjakana.